Bioaerosol metụtara equipments Manufacturers - China Bioaerosol metụtara equipments Suppliers & Factory
Igwe foto ZR-6010 Aerosol
A na-eme photomet ZR-6010 Aerosol nke ọma na ụkpụrụ Mie achụsasị, nke a na-eji nwalee ma enwere ịgba mmiri na HEPA filter. Ngwaọrụ kwekọrọ na ọkọlọtọ mba na ụlọ ọrụ metụtara, nwere ike ịchọpụta nchoputa ngwangwa nke nchọpụta mbido na mgbada na ngosipụta ngosipụta oge na onye nwe ihe na ngwaọrụ ejiri aka, wee nwee ike ịchọta ọnọdụ ịgba ọsọ ọsọ na n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ na ọdabara ka leakage nchọpụta nke dị ọcha ụlọ, VLF bench, biosafety kabinet, uwe igbe, HEPA agụụ Cleaner, HVAC usoro, HEPA nyo, na-adịghị mma nsogbu nzacha usoro, ọrụ nkiri, nuklia nyo usoro, collection echebe nyo.
ZR-1100 akpaka colony counter
Ihe ntanye aka nke ZR-1100 bụ ngwa ahịa ọgbara ọhụrụ etolite maka nyocha ógbè microbial na nchọpụta nha micro-urughuru. Ihe onyonyo nhazi ihe onyonyo di omimi na ihe omimi sayensi nyere ya aka inyocha ihe ndi mmadu choro ma choputa ihe ndi ozo, iguta ya bu ngwa ngwa.
Okwesiri maka nchoputa ihe banyere oria ogwu na ulo ogwu, ulo oru nyocha nke sayensi, ulo ogwu ahu ike na oria oria ojoo, ebe ndi mmadu na-acho oria, nyocha na ndi mmadu, ndi oru nlezi anya na ndi oru nyocha, ndi oru nyocha banyere gburugburu ebe obibi, na ndi ogwu, nri na onunu, ulo oru ogwu na ahu ike. wdg